Global Voices teny Malagasy » Azerbaijan: Mpikatroky ny N!DA miatrika famonjàna 6-8 taona · Global Voices teny Malagasy » Print
Azerbaijan: Mpikatroky ny N!DA miatrika famonjàna 6-8 taona
Voadika ny 21 Mey 2019 6:41 GMT 1	 · Mpanoratra Arzu Geybullayeva Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Azerbaijan, Fahalalahàna miteny, Fandrahonana-lalàna, Fanoherana, Hafanam-po, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona, Feo voarahona
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny May 2014)
Mankany amin'ny lahatsoratra anglisy ny rohy rehetra raha tsy misy fanamarihana manokana
Sary fanentanan'ny N!DA. fampiasàna nahazoana alàlana.
Tamin'ity herinandro ity tao Azerbaïdjan, nomelohin'ny tribonaly mitsara ny heloka henjana ao Bakou ny lehilahy 8  – 7 mpikambana avy amin'ny hetsika sivily N!DA  ary 1 mpikambana avy amin'ny hetsika Free Youth (tanora afaka) – higadra 6 ka hatramin'ny 8 taona. Fiampangàna diso no nanenjehana azy ireo – fanaovana toetran-jiolahimboto, fitazonana zavamahadomelina sy fitaovampiadiana tsy nahazoana alàlana, raha tsy hitanisa afa-tsy ireo – saingy ny tena helok'izy ireo marina dia ny niarovany ny demaokrasia sy ny soatoaviny.
Ny Martsa 2013, niha-nahazo vàhana ny hetsika N!DA rehefa nampiasa ny tambajotra sôsialy ny sasantsasany tamin'ireo mpikambana ao anatiny mba hikarakarana fihetsiketsehana iray ho entina manamarika ireo toejavatra feno misitery manodidina ny fahafatesan'ny miaramila iray , Jeyhun Gubadov. Ny antontan-taratasin'ny tafika milaza hoe matin'ny fitsaharan'ny fo i Jeyhun Gubadov, nefa olona salama tsara izy ary tsy nanana tantara taminà resaka olan'ny fo talohan'ny niantsoana azy ho miaramila azy. Navoakan'ireo olona avy amin'ny fianakavian'ilay miaramila ny fomba fijerin-dry zareo ny zava-nitranga, tamin'ny fiahiahiana ny fisian'ny fanaovana tatitra diso. Ho fanehoankevitra tamin'ny nahafaty an'i Jeyhun Gubadov, nisy hetsika am-pilaminana iray nokarakarain'ireo mpikambana avy amin'ilay hetsika tao Bakou hanoherana ny fitomboan'ny isan'ireo miaramila maty taorian'ny fampijaliana nitsapàna azy ireo sy ny herisetra ao anivon'ny tafika. Samy naparitaka an-kerisetra daholo ireny fihetsiketsehana ireny sy ny maro hafa koa. Na ny hetsipanoherana ny fampijaliana fitsapàna ao anatin'ny tafika, na ny mpivarotra mijoro manohitra ny fiakaran'ny hofantrano, na ny hatezeran'ny mponina ao amin'ny tanàna iray ivelan'i Bakou, tsapa ao Azerbaijan ny marika mazavan'ny tsy hafaliana mitombo  eny anivon'ny vahoaka.
Ny 7 Martsa 2013, andro telo taorian'ilay hetsipanoherana tsy naharitra ela nokarakarain'ny N!DA, voasambotra i Bakhtiyar Guliyev sy Shahin Novuzlu, mpikambana ao anatin'ilay vondrona, ary nampangaina ho nitàna fitaovampiadiana tsy nahazo alàlana sy zavamahadomelina. Nisy hany koa tatitra hoe nanjavona ny mpikambana iray hafa, Mahammad Azizov. Iny andro iny ihany, namoaka fanambaràna iray ny ministeran'ny fahasalamàna sy ny lehiben'ny fampanoavana, nanamarihany fa nisy coktails Molotov, marijuana (rongony mahery) sy zavamahadomelina hafa hita nandritra ny fisavàna ny tranon'ireo mpikatroka nosamborina. Araka ilay fanambaràna, nisy afisy vita printy misy teny faneva hoe « maika ny filàna demaokrasia » hita ihany koa. Ny andro manaraka an'io, nibaboka ny helony ireo lehilahy telo rehefa niseho teo amin'ny fahitalavitra nasiônaly. Fotoana fohy taorian'izay no nanamelohana azy ireo hifonja 3 taona.
Ny 10 Martsa, nisy hetsipanoherana iray nampitondraina lohateny hoe « Atsaharop ny fahafatesan'ireo voaantso ho miaramila » nokarakaraina indrindra indrindra tamin'ny alàlan'ny tambajotra sôsialy, nahavory olona teo amin'ny 4.000 eo ary nahazo mpanohana niisa 15.000 tao amin'ny Facebook. Na nitanjozotra am-pilaminana aza ireo mpanao hetsipanoherana, ny firotsahana an-kerisetra nataon'ny polisy no namadika ilay famoriambahoaka ho lasa ny iray amin'ireo nahery setra indrindra tato anatin'ny folo taona farany. Tao anatin'ireo herinandro nanaraka izay, samy voasambotra daholo ry Rahsad Hasanov, Rashadat Akhundov, Uzeyir Mammadli, Zaur Gurbanli ary notazonina noho ny fiampangàna azy ireo ho nitazona fitaovampiadiana tsy nahazoana alàlana. Ny 17 May, nisy tanora iray mpikatroka, Ilkin Rustamzad (mpikambana anatin'ny hetsika « Active Youth » (tanora mihetsika) notànana vonjimaika nandritra ny 2 volana noho izy nandrakitra an-dahatsary sy nandefa tao amin'ny Youtube ny lahatsary iray « Harlem shake ». Ny 12 Septambra, niatrika fiampangàna iray vaovao ireo lehilahy 8 : fikarakaràna korontana narahana herisetra, fahavoazana sy fanimban-javatra voasazin'ny artikla 220.1 ao amin'ny lalàna famaizana.
Nanomboka ny Aprily 2014 ny fiatrehana fitsaràna. Efa ela taty aoriana, tamin'io volana io, nangatahan'ny mpampanoa lalàna ny hampiharana sazy famonjàna 6 hatramin'ny 8 taona .
Tamin'ny andro nanaovan'ny mpampanoa lalàna ilay fangatahany, nanambara ny hanombohany fitokonana tsy hisakafo ireo lehilahy valo, ary nandritra ireo roapolo andro nialohan'ny fitsaràna, nandà tsy hisakafo ireo lehilahy valo mpikambana avy amin'ny N!DA naiditra am-ponja ireo. Taorian'ny fitsaràna tsy naharitra ela, samy voaheloka taminà fiampangàna diso avokoa ny tsirairay tamin'ireo 8, araka ireto sazy tanisaina manaraka ireto :
Shahin Novruzlu – 6 taona
Mahammad Azizov – 7.5 taona
Bakhtiyar Guliyev – 7 taona
Rashadat Akhundov – 8 taona
Rashad Hasanov – 7.5 taona
Zaur Gurbanli – 8 taona
Ilkin Rustamzade – 8 taona
Uzeyir Mammadli – 7 taona
Ireo tonga hanohana an-dry zareo dia nifamory teo anoloan'ny lapan'ny fitsaràna ary nanomboka nihiakiaka ny hoe « Azadeta » (avotsory ry zareo), teny faneva iray manainga ny filoha sy ireo manampahefana mahefa mba hanafaka ireo mpikatroka 8, nefa koa nisy tenifototra iray malaza nampiasaina mba hanaparitahana ny vaovao momba ny « raharahan'izy valo ». An-kerisetra no nanaparitahan'ny polisy ny vahoaka , nanosika io mpanao hetsipanoherana hiala ny faritry ny tribonaly. Araka ireo tatitra avy ao an-toerana, olona 30 no nosamborina, nasesika tanaty fiarabe ary nentina tany amin'ireo toby samihafan'ny polisy.
Tamin'ny fanambaràna farany nataon'izy ireo tao amin'ny tribonaly , nanambara ireo lehilahy 8 mpikatroka ireo fa na nolavina aza ny fangatahana ny hanafahana azy ireo, nanapaka hevitra ry zareo ny hampiato ny fitokonana tsy hisakafo. Nohazavain'izy ireo nazava tsara ny sata ametrahana azy ireo ho lasibatra politikan'ny eo amin'ny fitondràna am-perinasa, ary noho izany dia avelan'izy ireo heloka ireo mpitsara noho ny fanapahankevitra noraisina, toy izao :
« […] fantatray fa na ny mpampanoa lalàna na ianareo mpitsara, samy tsy nanana safidy hafa. Voafetra ny andraikitrareo ety amin'ny tribonaly, miasa ho toy ny mpitantsoratry ny fitsaràna fotsiny izay ny anjara asa dia ny manao izay haha-ara-drariny ny fandaminana voapetraka sy ny fitondram-panjakana amperin'asa. Na mitaky aminareo hiasa mifanohitra amin'izany aza ny lalàna sy ny feon'ny fieritreretanareo, tsy sahinareo ny handà baiko. Tsy maintsy marihanay ihany koa fa tsy izahay irery no voadona mafy amin'izao fitsaràna izao. Ny fanendrena anareo ho mpitsara sy mpampanoa lalàna dia mahatonga anareo ho voadona amin'ity raharaham-pitsarana namboamboarina ity. Ny tena marina, izahay, aty ambadiky ny hazomeloka, tahaka anareo ihany, malalaka, dia samy takalonaina sy mizaka ny fiantraikan'ity fonjabe antsoina hoe Azerbaïdjan ity.
Na tsy nahazo valiny nahafa-po aza ny fangatahanay, ary amin'ny fanaovana ho sorona ny fitakianay fahalalahana ho an'ny tanjonay, atsahatray ny fitokonana tsy hisakafo. Saingy mitohy ny tolona ! »
Tohin'io didy io, nanoratra ilay mpanao gazety Khadija Ismayil tao amin'ny pejiny facebook , « notsaraina ho meloka noho ny faharanitantsaina, ny fahaizana, ny fahasahiana ary ny fahamendrehany, » betsaka ireo mitovy hevitra amin'izany. Kanefa, raha ny sasany milaza ampahibemaso an'io ahiahy io, ny hafa kosa manohy miaina eo ambany aloky ny tahotra eto Azerbaïdjan, antsoina ihany koa hoe Tanin'ny Afo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/05/21/138056/
 ny lehilahy 8: http://amnesty.org/en/news/azerbaijan-chair-council-europe-amid-climate-fear-and-suppression-2014-05-06
 fahafatesan'ny miaramila iray: http://www.balcanicaucaso.org/eng/Regions-and-countries/Azerbaijan/Riots-and-protests-in-Azerbaijan-130268
 An-kerisetra no nanaparitahan'ny polisy ny vahoaka: http://www.azadliq.org/media/video/25375277.html
 fanambaràna farany nataon'izy ireo tao amin'ny tribonaly: http://www.meydan.tv/en/site/news/1581/NIDA-Activist-Sentenced-%28UPDATED%29.htm
 pejiny facebook: https://www.facebook.com/khadija.ismayil?fref=ts